Mejuputa a Nseta ihuenyo ድን ọrụ Service | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 6, 2011 Sunday, October 30, 2011 Douglas Karr
Izu a, ana m aru oru na (ozo) saiti ozo DK New Media. Nke a dị mma - na-ese foto na Paul D'Andrea mere maka ụlọ ọrụ anyị yana ịnye nnukwu HTML5 saịtị nke kwekọrọ na ihe nchọgharị. Anyị ka nwere ọrụ anyị ga-arụ na ọsọ, ịkpọ oku na ntinye na ibe - mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ.
Otu n'ime ihe anyị chọrọ ime bụ igosi ndị ahịa anyị na saịtị ahụ. Ebe ọ bụ na ọnụọgụgụ ahụ na-arịgo, itinye mmejuputa ọhụụ na ịlaghachi iji jide akara ngosi ma ọ bụ nseta ihuenyo nwere ike ịbụ ihe mgbu. Oge a, ekpebiri m itinye ọrụ nseta ihuenyo. O di nwute, nke a adighi nfe ka ichoro… otutu di oke onu ma koodu itinye ya bu ihe nzuzu mgbe ufodu.
M mere n'ofe ọrụ ọhụrụ, Utoro2, n'ehihie a ma tinye ya n'ọrụ n'ime nkeji ole na ole! Hazi isiokwu WordPress were ogologo oge karịa itinye n'ọrụ nseta ihuenyo n'onwe ya. Ọbụna ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na ndị nọ ebe ahụ na-enyocha arịrịọ m na mgbe m laghachiri na saịtị ahụ, ha mepere nkata na m iji hụ ma enwere m nsogbu. Chaị!
Ọrụ ahụ anaghị akwụkwa ụgwọ ka ụfọdụ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị rịọ arịrịọ… ha ga-echekwa ihe oyiyi ahụ ụbọchị 30 ma ha agaghị akwụ gị ụgwọ maka arịrịọ ndị ahụ. Nke ahụ pụtara na enwere m ike iji saịtị ahụ rụọ ọrụ maka $ 10 kwa ọnwa (ihe ruru 1,000 URls pụrụ iche). Egwu!
Arịrịọ ahụ kachasị dị mfe achọtala… naanị ụzọ dị mfe iji wuo onyogho onyogho na mgbanwe niile n'ime URl. Ha enyela ntinye ederede maka PHP, Eke Ọgba, Naa na Bash… Ha niile bụ nanị ole na ole ahịrị koodu. Ọ bụrụ na ịmeghị arịrịọ ahụ nke ọma, ha na-abanye okwu ahụ wee nye gị ihe oyiyi nwere akara mmiri na ya. Ezubere nke ọma!
Nsonaazụ ikpeazụ mara mma. Anyị nwere ibe ndị ahịa ebe ndị folks nwere ike ịmegharị saịtị ọ bụla wee hụ ọrụ anyị meere ndị ahịa:
Ọ bụrụ na onye ọbịa bịara pịa njikọ ahụ, ọ na-ewetara ha otu ibe ebe ha nwere ike ịhụ ụdị nke nseta ihuenyo ka ukwuu:
Akụkụ kachasị mma n'iji ọrụ ahụ bụ na, ka anyị na-agbakwunye ndị ahịa ọhụụ, ekwesighi m ịpụ ma nweta ihuenyo maka ha mgbe m tinye ha na pọtụfoliyo saịtị ahụ. Na oge echekwara nwere ike ịbụ ihe kacha mma kpatara ihe niile!